ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: June 2007
မှတ်ချက်2 ခု ရေးပြီးချိန်: 6/30/2007 12:28:00 AM
ကြုံရင် ကြုံသလို ကျွန်မဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်ထဲက ကျွန်မကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ စာစုတချို့ကို ကောက်နှုတ် ဖော်ပြသွားချင်ပါတယ်။ တပတ် တခါလောက် ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
People are unreasonable, illogical and selfcentered.
What you spent years building may be destoryed overnight.
လူတွေသည် အကြောင်းအကျိုး မသိ၊
လူတွေသည် ကောင်းသောအမှု သင်မည်မျှပြုသော်လည်း
မရိုးမသား ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက်ပါဟု စွပ်စွဲကြလိမ့်ဦးမည်။
မည်သို့ဖြစ်စေ၊ ကောင်းသော အမှုပြုမြဲပြုပါ...
မည်သို့ဖြစ်စေ၊ အောင်မြင်ရန်သာ အားထုတ်ပါ...
ရိုးဖြောင့်ခြင်း၊ ပွင့်လင်းစွာ စကားဆိုခြင်းတို့ကြောင့်
သင့်မှာ ထိခိုက်စရာတွေ ကြုံချင်ကြုံရလိမ့်မည်။
မည်သို့ဖြစ်စေ၊ ရိုးဖြောင့် ပွင့်လင်းစွာသာ ပြောဆို ဆက်ဆံပါ...
သင် ယနေ့ပြုသော ကောင်းသောအမှုကို
မနက်ဖြန် သူတို့ မေ့လျော့ကောင်း မေ့လျော့ကြလိမ့်မည်။
မည်သို့ဖြစ်စေ၊ ကောင်းသော အမှုကို ပြုမြဲပြုပါ...
အကြီးကျယ်ဆုံး စိတ်ကူးဥာဏ်ရှိသည့် အမြင့်မားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်း
အနုံခြာဆုံး စိတ်ထားရှိသည့် အသေးမွှားဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ထံ
ဝေဖန်ခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ အပုပ်ချခြင်း ခံရနိုင်သည်။
မည်သို့ဖြစ်စေ၊ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မြင့်မြင့်မားမားသာ စဉ်းစား ကြံစည်ပါ...
လူတွေသည် နိမ့်ပါးသူ အောက်လူများကို စေတနာပိုတတ်သည် ဆိုသော်လည်း
(လက်တွေ့၌) အပေါ်စီးရသူ ထိပ်ဆုံးလူများနောက်သို့သာ လိုက်ပါတတ်ကြသည်။
မည်သို့ဖြစ်စေ၊ အချို့သော နိမ့်ပါးသူ အောက်လူတို့ အတွက် ရပ်တည်ပေး၊ တိုက်ပွဲဝင်ပေးပါ...
နှစ်ပေါင်းများစွာ သင်တည်ဆောက်ခဲ့သော အရာသည်
နေ့ချင်း ညချင်း ဖြိုလှဲဖျက်ဆီးခြင်း ခံချင်ခံရလိမ့်မည်။
မည်သို့ဖြစ်စေ၊ တည်ဆောက်စရာရှိတာ ဆက်လက် တည်ဆောက်ပါ...
ကမ္ဘာလောကအတွက် အကောင်းဆုံးကို သင်ပေးလျက်လည်း၊
သင့်အား ခါးသည်း နာကျည်းဖွယ် တုံ့ပြန်ကောင်း တုံ့ပြန်လိမ့်မည်။
မည်သို့ဖြစ်စေ၊ သင့်မှာ ရှိသည့် အကောင်းဆုံးကိုသာ ပေးမြဲပေးပါ...
(ဆရာဖေမြင့်ရဲ့ စာဖတ်သမား၏ မှတ်စုများမှ)
ကောက်နှုတ်ချက်။...။ ဆရာဖေမြင့်၏ စာဖတ်သမား၏ မှတ်စုများ
မှတ်ချက်2 ခု ရေးပြီးချိန်: 6/29/2007 10:59:00 AM
မြန်မာနိုင်ငံလည်း မပြန်ဖြစ်တာကြာပြီ။ ပြန်စရာအကြောင်းကလည်းမရှိ၊ အိမ်ကလည်း ဘာအတွက် ပြန်မှာလဲဆိုတာနဲ့ပဲ မပြန်ဖြစ်ဘူး။ ညနေက မကေသွယ် ရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ ကျိုက်ထီးရိုးအကြောင်း သွားဖတ်ရင်း မြန်မာကို တော်တော်လွမ်းသွားတယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာမှာမှ ကောင်းကောင်းစားရမယ့် ကျွန်မစားချင်တဲ့ အစားအစာတွေကို ချရေးချင်စိတ်ပေါက်လို့ ရေးလိုက်တယ်။ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး...:P
ကြေးအိုးဆီချက် (ကျွန်မက ကြေးအိုးအရည် မကြိုက်ဘူး)
ဓနုဖြူဒေါ်စောရီဆိုင်မှ ထမင်း၊ ဟင်း
လမ်းထိပ်က ကြာဇံနဲ့ ခေါက်ဆွဲ ရောသုပ်ထားတဲ့ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်အသုပ်လေး (အသုပ်စုံ မဟုတ်ဘူးနော်။ ကျွန်မက အသုပ်စုံမကြိုက်)
နွားနို့ပူပူလေးကို သကြားမပါ ဆားလေးနဲ့
ကျွန်မစဉ်းစားရမိသလောက် ကျွန်မကြိုက်တဲ့၊ စားချင်တဲ့ အစားအစာတွေ ရေးထားတာပါ။ နောက် သတိရရင် ရသလို ဆက်ပြီး ထည့်ရေးသွားဦးမယ်။ အားလုံးလည်း စားချင်တာလေးတွေ ရှိသေးရင် ကွန်မန့်မှာ ထည့်ရေးပေးသွားနော်။ ကျွန်မ ဒီရက်ပိုင်း သိပ်မအားလို့ ပို့စ်တင်ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှပဲ ရေးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
ဖားသားဟင်း (ဒီမှာလည်း စားရပါတယ်...နည်းနည်းတော့ ဈေးကြီးသား)
လယ်ကြွက်ကို စပ်စပ်လေး ကြော်ထားတာ...
ဖြစ်နိုင်ရင် တောကြောင်သား နဲ့ တောဝက်လည်း စားချင်သား (လောပိတမှာနေတုန်းကပဲ စားခဲ့ရတယ်...)
မှတ်ချက်5 ခု ရေးပြီးချိန်: 6/28/2007 10:16:00 PM
မှတ်ချက်8 ခု ရေးပြီးချိန်: 6/27/2007 05:35:00 PM
မှတ်ချက်6 ခု ရေးပြီးချိန်: 6/26/2007 12:37:00 AM
မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေရဲ့ ကိုယ်စားပြုအလံတွေရှိမှန်းသိပေမဲ့ သေချာတော့ မမြင်ဖူးခဲ့ဘူး။ မနေ့က ဆိုဒ်တစ်ခုမှာ တွေ့လိုက်လို့ ဗဟုသုတအလို့ငှာ စုစည်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဒါကတော့ လူတိုင်းသိတဲ့ ခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလံပုံပါ...
အဲဒီအလံမှာ ပါတာတွေကို အသေးစိတ် ဖော်ပြထားတာပါ... အလုပ်သမားကို ကိုယ်စားပြုတဲ့စက်သွားရယ်၊ တောင်သူလယ်သမားတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ စပါးနှံရယ်၊ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း ၁၄ ခုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကြယ် ၁၄ လုံးရယ်...
ဒါကတော့ အလံမှာပါတဲ့ အတိုင်းအတာ အချိုးအစား
ခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအလံမတိုင်ခင် ခေတ်အဆက်ဆက် အသုံးပြုခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအလံတော်တွေပါ...
၁၇၅၂ ကနေ ၁၈၈၆ ထိ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအလံ
၁၈၈၆ မှ ၁၉၃၉ ထိ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအလံ
၁၉၃၉ မှ ၁၉၄၁ ထိ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအလံ
၁၉၄၁ မှ ၁၉၄၂ ထိ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအလံ
၁၉၄၂ မှ ၁၉၄၃ ထိ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအလံ
၁၉၄၃ မှ ၁၉၄၅ ထိ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအလံ
၁၉၄၅ မှ ၁၉၄၈ ထိ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအလံ
၁၉၄၈ မှ ၁၉၇၄ ထိ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအလံ
၀န်ခံချက် ။...။ အလံပုံများကို ဤနေရာမှ ရယူသည်...
မှတ်ချက်8 ခု ရေးပြီးချိန်: 6/25/2007 12:22:00 AM
မှတ်ချက်7 ခု ရေးပြီးချိန်: 6/24/2007 10:17:00 AM
ˍˍ▊ˍˍ*ˍˍ ． ．*
／* ＼*﹨*﹨***＼° *
* │**║ * ╭┬╮*│◢█
◣ ＠ │ *║ │││ ◢███
◣ ║╓╥╥╥* ● ● ╥*╥╥
╥╥▊╖ ╔╩╬╬╬╬ _/█_/█_
ငါ့ဘ၀ ရှင်လျက်နဲ့ သေခဲ့ပြီ။ ။
ဒီနေ့လည်း စာရေးရမှာ ပျင်းတာနဲ့ ဟိုးအရင်က ကျွန်မရေးထားခဲ့တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပဲ တင်လိုက်တော့တယ်... နောက်နေ့တွေတော့ စာရေးချင်စိတ်ရှိအောင် ကြိုးစားလိုက်ပါဦးမယ်...:P
1 comments ရေးပြီးချိန်: 6/23/2007 12:55:00 AM
မှတ်ချက်5 ခု ရေးပြီးချိန်: 6/22/2007 12:29:00 AM
မျှော်လင့်နိဂုံး၊ နွေးသယောင် နှင်းပန်း
ရွက်ပြာ လေနှင်၊ ပြိုမယောင် အမုန်း
မှတ်ချက်6 ခု ရေးပြီးချိန်: 6/21/2007 01:09:00 AM
မမေ (မမေဓာဝီ) က မိုးနဲ့ပတ်သက်တာ ရေးခိုင်းလို့ ရေးလိုက်ပါတယ်...။
မိုးရာသီ...တကယ်တော့ ကျွန်မ မိုးရာသီကို မကြိုက်ပါ။ မိုးက လူရဲ့ စိတ်ကို လေးလံ၊ ထိုင်းမှိုင်း၊ ပျင်းရိစေတယ်။ ဒါက ကျွန်မ အမြင်ပေါ့နော်။ မိုးရွာနေရင် အပြင်ထွက်လို့လည်း မကောင်း၊ စိုစွတ်စွတ်နဲ့။ ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် မိုးရေထဲ လမ်းလျှောက်ရတာကို ကျွန်မ တော်တော် စိတ်ပျက်ပါတယ်။ မိုးကို ကြိုက်တာဆိုလို့ ညဘက်အိပ်ခါနီးအချိန်တွေမှာ ရွာတဲ့မိုးပဲ ကြိုက်တယ်။ သွပ်မိုးပေါ်ကို တဖြောက်ဖြောက်ကျနေတဲ့ မိုးသံလေးနားထောင်ပြီး အိပ်ရတာလောက် ဇိမ်ရှိတဲ့အရာရှိပါ့မလား။ (ဒီနေရာမှာတော့ အုတ်ကြွပ်မိုးတွေက သိပ်မမိုက်ဘူး။) ဘာအလုပ်မှ လုပ်စရာမလို၊ ဘယ်နေရာမှာ သွားစရာမလိုတဲ့နေ့ မိုးရွာရင်တော့ တော်တော်သဘောကျပါတယ်။ မိုးရွာနေတာလေးကြည့်ပြီး ဘယ်ကိုမှန်းမသိ လွမ်းလို့လည်းရ၊ အိပ်ရာထဲမှာလည်း ချမ်းစိမ့်စိမ့်နဲ့ မိုးသံလေးနားထောင်ရင်း ကွေးလို့လည်းကောင်း။ တကယ့် နိဗ္ဗာန်ဘုံပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ မနက် အလုပ်သွားဖို့ အိပ်ရာက ထရချိန်မှာ မိုးရွာရင်တော့ မိုးကို ကြည့်မရပါဘူး။
မိုးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရ ကျွန်မမှာ သိပ်မရှိဘူး။ မှတ်မိသလောက်ပြောရရင် ကျွန်မ ငယ်ငယ် လောပိတမှာနေတုန်းကတော့ လေကြီးမိုးကြီးကျနေတဲ့ မိုးတွင်းတွေကိုသာ ကြုံခဲ့ရတယ်။ မိုးတိတ်သွားရင် လမ်းမပေါ်မှာသစ်ပင်၊ သစ်ကိုင်းတွေကျိုးကျနေတဲ့မြင်ကွင်းကတော့ နှစ်စဉ်မြင်နေကျပါပဲ။ တခုသော မိုးရာသီမှာတော့ မိုးသီးကြွေတာကို တသက်လုံးမှာ အဲဒီတစ်ကြိမ်တော့ ကြုံခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီနှစ်က မိုးတော်တော် သည်းသည်းထန်ထန်ရွာတဲ့နှစ်။ မိုးနဲ့အတူ လေပါရော တိုက်ခတ်လာတော့ တချို့အလုပ်သမားတွေရဲ့ အိမ်သာတွေ လွင့်၊ အိမ်ခေါင်မိုးတွေ လန်တဲ့နှစ်ပါပဲ။ မိုးသီးဘာကြောင့်ကြွေလဲ ကျွန်မ သိပ်မသိပါဘူး။ အဲဒီနေ့ကတော့ မိုးသီးကြွေတယ်လို့ ကျွန်မအစ်ကိုက ထအော်လေတော့ ကျွန်မတို့ တမိသားစုလုံး အိမ်ရှေ့ဆင်ဝင်အောက် ထွက်လာကြပြီး မိုးသီးကြွေတာကို ကြည့်ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်မတို့ အငယ် မောင်နှမ သုံးယောက်ကတော့ မိုးရေထဲထွက်ဆော့ခွင့်မရပေမဲ့ မကြီးနဲ့ ကိုကြီးကတော့ ခေါင်းပေါ်မှာ လင်ပန်းလေးတွေ ရွက်ပြီး ဟိုပြေး၊ ဒီပြေးလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ လင်ပန်းပေါ်က ဆီးစေ့အရွယ် မိုးသီးလေးကို စားဖူးတယ်ရှိအောင် ပါးစပ်ထဲ ထည့်ခဲ့ဖူးတယ်။ မိုးသီးဆိုတာ ရေခဲပါပဲ... အရည်ပျော်တာလည်း အရမ်းမြန်တယ်။ မိုးသီးကြွေတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်မ မှတ်မိတာ ဒီလောက်ပါပဲ။
ရယ်စရာအနေနဲ့ ကျွန်မမှတ်မိနေတဲ့ မိုးရွာတဲ့ နေ့တနေ့ရှိသေးတယ်။ ကျွန်မမောင်လေး ၄နှစ်သားအရွယ်က အိမ်ရှေ့ဆင်ဝင်အောက် အုတ်ခုံပေါ်မှာ မိုးရွာနေတာကို သူက ရပ်ကြည့်ရင်း တခြားကလေးတွေလို ခုန်ပေါက်သီချင်းဆိုနေတာ မဟုတ်ဘဲ ~~~မိုးလေးက တဖွဲဖွဲရွာနေတော့...~~~ ဆိုပြီး ပါးစပ်ထဲတွေ့ရာကို လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေး သီချင်းလုပ်ဆိုနေပါတယ်။ အဲဒီချိန်မှာပဲ """ဂျိန်း""" ဆိုတဲ့ မိုးခြိမ်းသံ အကျယ်ကြီးလည်း ကြားရော သူ့တကိုယ်လုံး တုန်တက်သွားပြီး အိမ်ထဲ ၀င်ပြေးလာတာပါ။ မိုးကိုကြည့်ပြီး ဖီလင်အပြည့်နဲ့ သီချင်းဆိုနေတဲ့ ကျွန်မ မောင်လေး ရုတ်ချည် ကြောက်လန့်တကြား ပြေးလာပုံကို အဲဒီတုန်းက ကျွန်မမှာ ရယ်လိုက်ရတာ အားရပါးရ။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မိုးရွာနေတဲ့ နေရာနဲ့ နေပူနေတဲ့ နေရာ အလယ်တည့်တည့်မှာ ကျွန်မရပ်နေခဲ့ဖူးတယ်။ မှော်ဘီ GTC မှာ ကျောင်းတက်ချိန်က ကျောင်းကနေ ကျောင်းကားဂိတ်ကို လျှောက်အလာ ကျောင်းဘက်မှာ မိုးမရွာဘဲ ကျောင်းနဲ့ နှစ်မှတ်တိုင်အကွာ ကားဂိတ်ဘက်မှာ မိုးဖွဲလေးရွာနေတာ။ အဲဒီလို မိုးရွာတဲ့ဘက်နဲ့ မရွာတဲ့ဘက်မှာ နေဖူးတယ်ရှိအောင် အလယ်တည့်တည့်မှာ ကျွန်မ သွားရပ်ခဲ့တယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ ခဏပါပဲ...နောက်တော့ မိုးတိတ်သွားတယ်။ အဲဒီတုန်းက camera အလွယ်တကူမရှိလေတော့ ဓာတ်ပုံတောင် မရိုက်ထားခဲ့ရဘူး။ ခုထိတော့ အဲဒီလိုမျိုး တခါမှ ထပ်မကြုံဖြစ်ပါဘူး။
မိုးရွာချိန် ပုံတော်ဖိနပ်စီးထားလို့ အရှက်ကွဲရတာလည်း များပြီ။ မြန်မာဖိနပ်တွေက နေရာတိုင်း ကျောက်ပြားအချောခင်းထားတဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ မိုးရွာနေရင် စီးလို့မကောင်းဘူး။ ဖိနပ်အောက်ခံကလည်း ချောနေလို့ဖြစ်မယ်။ ဒါပေသိ ကတ္တီပါ ပုံတော်ဖိနပ်တွေကြိုက်လေတော့ ခုချိန်ထိလည်း စီးတုန်းပါပဲ။ အဲဒီတော့ အရှက်ရတာတောင် နည်းသေးတယ်လို့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောရမှာပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က ကျွန်မ ကျောင်းကအပြန် မိုးရွာတယ်။ မိုးရွာတာက ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပေမဲ့ အဲဒီနေ့က ကျွန်မ ထီးမပါလာတာက ပြဿနာပါပဲ။ ကျွန်မက ထီးသယ်ဖို့ မမေ့တတ်၊ မပျင်းတတ်တဲ့လူထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက ပါတယ်။ နေအပူဒဏ်ကို နည်းနည်းလေးမှ မခံနိုင်တဲ့အတွက် နေပူပူ၊ မိုးရွာရွာ ထီးအမြဲ သယ်လေ့ရှိတယ်။ အဲဒီနေ့ကတော့ ထီးလည်းမပါ၊ မိုးလည်းရွာ၊ ပုံတော်ဖိနပ်ကလည်း စီးထားသေး ကျွန်မ တော်တော်ဒုက္ခရောက်တဲ့နေ့ပါပဲ။ အမိုးအောက်က လမ်းလျှောက်တော့ ခြေတစ်လှမ်း လှမ်းရင် တခါ ချော်ပါတယ်။ ကျွန်မ လမ်းဆက်လျှောက်လို့ကို မရဘူး။ အမိုးအောက်မှာလည်း မိုးခိုနေတဲ့လူတွေ အများကြီး။ နံရံကိုကိုင်ပြီး တစ်လှမ်းချင်း လျှောက်တာတောင် လျှောက်မရတဲ့အထိ ဖိနပ်က ချောနေတယ်။ မတ်တပ်တောင် ကောင်းကောင်းရပ်မရတဲ့ အဖြစ်ဆိုတော့ နောက်ဆုံး ဒီတိုင်းရပ်နေလို့လည်း မဖြစ်ချေဘူးဆိုပြီး ဖိနပ်ကို လက်တစ်ဘက်ကကိုင်၊ လက်တစ်ဘက်က လွယ်အိတ်ကိုပိုက်လို့ ခြေဘလာနဲ့ နောက်လှည့်မကြည့်တမ်း ပြေးရတော့တယ်။ လူလည်း ရှက်လိုက်တာမှ ပူထူလို့။
နောက်တကြိမ်ကတော့ မကြာသေးဘူး။ အလုပ်နားက ဘဏ်တခုကို နေ့လည်စာစားချိန်မှာ သွားခဲ့တယ်။ အချိန်ကလည်း သိပ်မရတော့ မြန်မြန်လျှောက်ရချိန်၊ မိုးရွာနေလို့ ကျောက်ပြားကြမ်းခင်းတွေက ရေစိုနေချိန်၊ စီးထားတဲ့ဖိနပ်ကလည်း ပုံတော် မဟုတ်ပေမဲ့ ကတ္တီပါခုံမြင့်ဖိနပ်။ အဲဒီဖိနပ်လည်း မထူးပါဘူး... ပုံတော်ဖိနပ်ဆို "ရွှီး...ဘိုင်း" ဆိုပြီး တကိုယ်လုံး ချော်လဲမှာ ပေါ့လေ။ ဒီဖိနပ်ကျတော့ တကိုယ်လုံးတော့ မလဲဘူး... ခြေမလေးတခုပဲ ချော်၊ ချော်သွားတာ။ ပြောရင်သာ ခြေမလေး... အီစိမ့်နေအောင်ကို ခံလိုက်ရတယ်။ တကြိမ်မက သုံးကြိမ်တိတိ... ဒီလောက် သတိထားနေတဲ့ကြားက "ရွှီး"ဆို ဖိနပ်အောက်က ခုံမြင့်က အချော်၊ ခြေထောက်ကလည်း အထိန်း၊ အဲဒီမှာ ခြေမလေးကပဲ ခေါက်ခေါက်လဲပြီး လူမလဲအောင် တန်ဆာခံပေးရရှာတာ။ တနေ့ထဲနဲ့ သုံးကြိမ် ဒီခြေမပဲ ဆိုတော့ စဉ်းစားသာကြည့်ပါတော့။ လမ်းကို မလျှောက်ရဲသလောက်ကို ဖြစ်တော့တာပဲ။ အလုပ်ကိုလည်း ရောက်ချင်တဲ့ချိန်မှသာ ပြန်ရောက်ပါစေတော့ဆိုပြီး ကြမ်းပြင်ကိုမနင်းရဲ နင်းရဲနဲ့ ရေမရှိတဲ့ နေရာရွေးလျှောက်လို့ ပြန်လာခဲ့ရတယ်။ မသိစိတ်က ဘယ်လောက်တောင် ကြောက်သွားလဲတော့ မသိဘူး။ နောက်ရက်တွေ အဲဒီ ဘဏ်ရှိရာ အဆောက်အဦးကို ရောက်ပြီဆိုရင် ဘာဖိနပ်ပဲ စီးထား၊ စီးထား လူက လမ်းအမြန် လျှောက်လို့မရတော့ဘူး။ သူ့အလိုလို ဖြည်းဖြည်းချင်း လျှောက်နေတာ ဆင်မယဉ်သာ။
မိုးရာသီကို မကြိုက်တဲ့အချက်တွေထဲမှာ လျှပ်စီးလက်တာနဲ့ မိုးခြိမ်းတာကြောင့်လည်း တခုအပါအ၀င်ပေါ့။ ကျွန်မအစ်မနဲ့ ကျွန်မက မိုးခြိမ်းတာကို တော်တော်ကြောက်တယ်။ အိမ်ထဲမှာဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် အမိုးအကာ လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ဆိုရင် သိပ်မကြောက်တတ်ပေမဲ့ အပြင်မှာ လမ်းလျှောက်နေချိန်နဲ့ အမိုးအကာ သိပ်မလုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာဆို ဟန်မဆောင်နိုင်လောက်အောင် ကြောက်တယ်။ လျှပ်စီးလက်တာမြင်တာနဲ့ မျက်လုံးကိုမှိတ်၊ နားကိုပိတ်ထားတတ်တာ လူရှေ့မရှောင်၊ သူရှေ့မရှောင်အကျင့်တွေပါ။ တခါတခါ "အမယ်လေး" ဆိုပြီး လွှတ်ခနဲတောင် အော်တတ်ပါသေးတယ်။ အဲဒီလို ကြောက်တတ်တဲ့အကျင့်တွေကြောင့် အရှက်ရပေါင်းလည်း မနည်းပါဘူး။ လူတွေအများကြီးဘေးမှာရှိချိန် လန့်လည်း မအော်၊ မျက်လုံးလည်းမမှိတ်၊ နားလည်းမပိတ်မိအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းလိုက်နိုင်သော်လည်း တဒိန်းဒိန်းနဲ့ နှလုံးအခုန်မြန်နေတာကိုတော့ ဘယ်လိုမှ တားမရ။ အဲဒီချိန်မှာ အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒက အိမ်ကို အမြန်ပြန်ရောက်ချင်တာပါပဲ။
အဖေက လျှပ်စီးလက်တာမြင်တာနဲ့ မိုးကြိုးပစ်ပြီးသွားပြီလို့ ဘယ်လောက်ပင်ပြောပြော ကြောက်မြဲကြောက်လျက်ပါပဲ။ ကျွန်မစိတ်ထင် ကျွန်မက မိုးကြိုးပစ်မှာ ကြောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ လျှပ်စီးဝင်းကနဲ လက်သွားတာရော၊ အဲဒီလျှပ်စီးလက်ပြီး မကြာခင်ကြားရမဲ့ အသံနက်ကြီးကိုရော ကျွန်မကြောက်တာပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ ခုလို မိုးရွာတာ မကြိုက်တဲ့ကျွန်မ၊ လျှပ်စီးလက်၊ မိုးခြိမ်းတာကို ကြောက်တတ်တဲ့ ကျွန်မက ကမ္ဘာပေါ်မှာ မိုးအခြိမ်းဆုံး၊ မိုးကြိုးအပစ်ဆုံးနိုင်ငံ၊ မိုးမရွာတဲ့နေ့ နေပူ၊ နေမပူတဲ့နေ့ မိုးရွာတတ်တဲ့၊ ပြောရရင်တော့ တစ်နှစ်လုံးလိုလို မိုးရွာနေတတ်တဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ လာနေနေရတာကတော့... ... ...
မိုးအကြောင်းရေးတဲ့ ဒီနေ့မှာ ကတ္တီပါ ဖိနပ်အပါးကိုစီးထားလျက် မိုးလေးကလည်း တဖွဲဖွဲရွာနေပါရောလား။
ကိုကြီး ကလိုစေးထူး (သူ့ကို Tag ထားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက ခုထိ မရေးသေးတဲ့အတွက် ထပ် Tagပါတယ်...ယိစ်((( ရေးပေတော့ကွ...)
ကိုမောင်ရင် (သူများတွေ Tag တာ မတွေ့မိသေးလို့ Tag လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးတွေ ရေးရဲ့လားမသိ... အားရင်တော့ ရေးပေးပါရန်...:P)
မှတ်ချက်4 ခု ရေးပြီးချိန်: 6/20/2007 01:45:00 AM
၁၇ ရက်နေ့က ဘုန်ကြီးကျောင်းမှာ အန်တီစုနာမည်ပုံဖေါ်ပြီး လှူဒါန်းထားတဲ့ပန်းပုံကိုတွေ့လို့ ဓာတ်ပုံရိုက်လာတာ...
ဒီနေ့ (၁၉.၀၆.၀၇) အန်တီစုမွေးနေ့မှာ အန်တီ့ရဲ့မိန့်ခွန်းအချို့ကို ကောက်နှုတ်ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်...
"ကျမ ဒီကနေစပြီးတော့ ပြည်သူလူထုနဲ့
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆံပါရစေ။ ကျမ နိုင်ငံခြားမှာ နေခဲ့တယ်ဆိုတာလည်း မှန်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားနဲ့ အိမ်ထောင်ကျတယ် ဆိုတာလည်း မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါလေးအတွက်နဲ့ ကျမ
တိုင်းပြည်အပေါ်မှာထားတဲ့ မေတ္တာဟာ ဘယ်လိုမှ ကျဆင်းမသွားနိုင်ပါဘူး။"
"နိုင်ငံရေးအလုပ် လုပ်တဲ့အခါမှာ ပြည်သူလူထုနဲ့ ကျမတို့ဟာ တတ်နိုင်သမျှ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆံချင်ပါတယ်။"
"အဆိုးဆုံး အစိုးရဆိုတာ ပြည်သူလူထု ရွံ့ ရှာမုန်းတီးနေတဲ့ အစိုးရ၊ ဒီထက် နည်းနည်းကောင်းတာက ပြည်သူလူထုက ကြောက်တဲ့ အစိုးရ၊ ဒီထက် ပိုပြီးကောင်းတာက ပြည်သူလူထုက ချီးမွမ်းတဲ့ အစိုးရ၊ အကောင်းဆုံးကတော့ ပြည်သူလူထုက ရှိမှန်းတောင်မသိတဲ့ အစိုးရတဲ့။ ကျမတို့ အိမ်တစ်အိမ်မှာ ဆိုရင် အမေလိုပေါ့။ အမေရှိမှန်းတောင် သတိမထားမိဘူး။ စားချိန်တန် စားရတယ်။ ၀တ်ချိန်တန် ၀တ်ရတယ်။ အားလုံး အဆင်သင့်ပဲ။ အဲ့သလို ဖြစ်နေရမယ်။"
"လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ လူတိုင်း လူတိုင်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ကိုယ်တင် မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ရန်သူများပင်လျှင် လူ့အခွင့်အရေး ရှိရမယ်။ အဲ့ဒီတော့ တနေ့ ကျမတို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုကြီး အောင်မြင်သွားတဲ့အခါကျရင် ရှုံးတဲ့သူတွေဟာ သူတို့ အခွင့်အရေးကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ခံစားနိုင်ရမယ်။ ဒါဟာ ကျမတို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီတာဝန် ဖြစ်တယ်။"
"မှန်ကန်တဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်မှာ ကျမတို့လိုချင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကို ကျမတို့က ဖော်ထုတ်ရမယ်။ လိုချင်တဲ့ပုံ သွင်းရမယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံ ကိုယ်မသွင်းလို့ရှိရင် ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူများက တိုင်းပြည်ကို သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံ သူတို့ သွင်းသွားလိမ့်မယ်။ အဓိပ္ပာယ်က ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ အာဏာရှင်စံနစ်ကြီး ဖြစ်သွားမှာပဲ။"
"ကျမတို့က ပြည်သူလူထုကို အားကိုးတယ်။ ပြည်သူလူထုကလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားကိုးကြပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်မသေးကြပါနဲ့။ လူထုရဲ့ အင်အားဆိုတာ အင်မတန်မှ ကြီးပါတယ်။ လူထုရဲ့ အင်အားဆိုတာကို မလေးစားဘဲ မနေနိုင်ပါဘူး။ ကျမတို့ကလည်း လေးစားတယ်။ နောင်လည်း အစိုးရအဆက်ဆက် လေးစားသင့်တယ်။ ပြည်သူလူထုကို လေးစားတဲ့ အစိုးရမျိုးကို ကျမတို့က ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ဒါမှ တိုင်းပြည်မှာလည်း အကျိုး ဖြစ်စေမယ်။ ပြည်သူလူထုကလည်း စိတ်ချမ်းသာလာမယ်။"
"ဒီအချိန်မှာ သတ္တိရှိရှိနဲ့ လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် နောင်ကျရင် ကျမတို့ဟာ မကြောက်ကြရတဲ့ ခေတ်ကို ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကြောက်ပြီးတော့ လုပ်သင့်သလောက် မလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင် နောက်ဆက်ပြီးတော့ ကြောက်နေရတဲ့ စနစ်ကို ရှင်သန်အောင် လုပ်ပေးသလို ဖြစ်သွားပါမယ်။ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း အများကြီး သိက္ခာကျပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ အားလုံးက မှန်တာလုပ်ရလို့ရှိရင် ကြောက်နေလည်း လုပ်ရမှာပါ။
"ဒီမိုကရေစီ လိုချင်တဲ့သူများဟာ မုန်းတဲ့စိတ်နဲ့ တိုက်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ မေတ္တာစိတ်နဲ့ တိုက်နေတာပဲ။ ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာ မေတ္တာရှိလို့၊ တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ မေတ္တာရှိလို့၊ ပြည်သူလူထု ခံနေရတာ၊ တိုင်းပြည် ခံနေရတာ၊ ပြည်ထောင်စုကြီး နစ်နာနေတာကို မကြည့်ရက်လို့ မေတ္တာစိတ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကို ၀င်နေတာဖြစ်တယ်။"
"ဖေဖေ အမြဲပဲမှာခဲ့တယ်။ ကလေးတွေကို ဘာကိုမှ မကြောက်စေနဲ့။ သူတို့ ကြောက်ဖို့ရာ နှစ်ခုပဲရှိတယ်။ မတရားတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ဖို့ ကြောက်ရမယ်။ မမှန်တဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ဖို့ ကြောက်ရမယ်။ လောကမှာ ကြောက်ဖို့ဆိုတာ ဒီနှစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီတော့ ကျမတို့ရဲ့ မိဘပြည်သူများကိုလည်း အဲ့ဒီလိုပဲ နားလည်စေချင်ပါတယ်။"
"မိဘတွေက ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုထဲမှာပါတဲ့ လူငယ်တွေကို ဟန့်တားနေကြတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။ မဟန့်တားကြပါနဲ့။ ကိုယ်ကြောက်လို့ သားသမီးတွေကိုပါ ကြောက်ဖို့ သင်ပေးတယ်ဆိုရင်သိပ်ပြီးဆိုးတာ ပေါ့။"
"ပြည်သူလူထုက စောင့်ကြည့်မယ်လို့ ပြောရင် ကျမက မေးချင်ပါတယ်။ ဘာကို စောင့်ကြည့်မှာလဲ။ သူများတွေ လုပ်သွားပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီ ရတဲ့အထိ စောင့်ကြည့်မှာလား။ ကျမတို့ စောင့်လို့ မဖြစ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီတော့ ၀ိုင်းဝန်းပြီးတော့ လုပ်ကြပါ။"
"ဒီအဖွဲ့ချုပ်ကြီးကို ဖျက်သိမ်းပေးမှ အမျိုးသားရေးဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကြီး အောင်မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့ ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။ ဒီအဖွဲ့ချုပ်က ရှေ့ကနေပေးမှ၊ ကာကွယ်ပေးမှ ဒီလှုပ်ရှားမှုကြီးဟာ အောင်မြင်မယ် ဆိုရင်လည်း ကျမတို့ ရှေ့ကနေပြီး ကာကွယ်ပေးပါ့မယ်။"
"ကျမတို့ဟာ အနိုင်ယူချင်ရင် အနိုင်ယူနိုင်တဲ့ စိတ်တွေ မွေးရပါမယ်။"
အန်တီစု ကျန်းမာစွာဖြင့် သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ။
(မိန့်ခွန်းတွေကို မေးလ်ကနေ ပို့ပေးခဲ့တဲ့ ကိုMTT ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...)
မှတ်ချက်3 ခု ရေးပြီးချိန်: 6/19/2007 08:14:00 AM
ဒီနေ့ စာရေးရမှာ ပျင်းလို့ လူလည်ကျလိုက်တာ...ဟီဟီ...
မမေနဲ့ ညီမလေးချိုကိုတို့ ဒါလေးကြည့်ပြီး စဉ်းစားကြနော်...
မှတ်ချက်2 ခု ရေးပြီးချိန်: 6/18/2007 04:46:00 PM
luv u so much, dad...
မှတ်ချက်0 ခု ရေးပြီးချိန်: 6/17/2007 12:19:00 AM
မှတ်ချက်7 ခု ရေးပြီးချိန်: 6/16/2007 09:17:00 PM